You are here: Home NEWS MRCCI NEWS
There wasaproblem loading image 9k=. in mod_featcats
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး) တို့မှ...
MDYITFBF 2019 - working committee's meeting5March 2019 (2:00 PM) #mdyitfbf2019 “၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့၊ Mandalay Convetion Center တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Mandalay Int’l Trade Fair and Business Forum 2019 အတွက်...
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ Golden Hotel တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲ ကုန်သည်ကြီများအသင်း...
Vacancy Announcement We are hiring! Job Title : Business Development Manager (1 Post) Job Requirements • Only Myanmar Citizens • Strong analytical business intelligence capabilities and operation...
MANDALAY INT’L TRADE FAIR & BUSINESS FORUM 2019 မှ ကြိုဆိုပါတယ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပွဲတော်ကြီးမှာ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြော်ငြာနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MANDALAY INT’L TRADE FAIR AND BUSINESS FORUM 2019 ပွဲကြီးကို မတ်လ...